အမြန်ယူထားသင့်တဲ့9Jan 2022 ရက်နေ့ထိပဲရမယ့် Promo Code အစီအစဉ်လေး ရှိတယ်နော် ~ The ICT.com.mm Blog
အမြန်ယူထားသင့်တဲ့9Jan 2022 ရက်နေ့ထိပဲရမယ့် Promo Code အစီအစဉ်လေး ရှိတယ်နော်
Promo Code ရယူနည်းလေးကတော့ –
1. အိုင်စီတီရဲ့ ဝက်ဘ်ဆိုဒ်ဖြစ်တဲ့ www.ict.com.mm ကိုသွားပါ။
2. ညာဘက်အောက်ခြေထောင့်မှာရှိတဲ့ Chat with us ကို နှိပ်ပါ။
3. လူကြီးမင်းရဲ့ အီးမေးလ်လိပ်စာလေးကို ထည့်သွင်းလိုက်ပါ။ (Points တွေရယူဖို့ဖွင့်ထားတဲ့ ICT Account မှာအသုံးပြုထားတဲ့အီးမေးလ်လိပ်စာနဲ့ အတူတူပဲဖြစ်ရပါမယ်နော်)
4. အီးမေးလ်လိပ်စာလေးထည့်ပြီးတာနဲ့ စာလုံး (၁၂) လုံးပါတဲ့ Promo Code လေးကို အလိုအလျောက် ထုတ်ပေးတာ တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ အဲ့ဒီ့ Promo Code လေးကို Copy လုပ်ပြီး Save လုပ်ထားလိုက်ပါ။
5. အိုင်စီတီမှာ လိုချင်တာတွေဝယ်ပြီးပြီဆိုရင် Check Out Page လေးကို ရောက်တဲ့အခါ လူကြီးမင်းရဲ့ 2022 ICT.com.mm Discount ရယူဖို့ ခုနက သိမ်းဆည်းထားတဲ့ စာလုံး(၁၂)လုံးပါ Promo Code လေးကို ထည့်သွင်းပေးလိုက်ရုံပါပဲ။
ကဲ အခုပဲ ICT.com.mm မှာ ဈေး၀ယ်ရင်း လေးကို အရယူလိုက်ပါဦးနော်။
#ShopICT #Myanmar #ICT #Promotion #promocodes
Newer Team Group 26% Off Promotion
Older TruSens Air Purifiers ဖြင့် သင့်ကိုယ်ပိုင်နေရာရှိ လေများကို အကောင်းဆုံးသန့်စင်လိုက်ပါ။